HP Inosheedzera Ichatanga Kutengesa Macs Kuwedzera Kune Mamwe Apple Zvigadzirwa | Ndinobva mac
HP inozivisa kuti ichatanga kutengesa maMac kuwedzera kune zvimwe zvigadzirwa zveApple
HP ichangobva kuzivisa mupepanhau, izvo munguva pfupi ichatanga kutengesa zvigadzirwa zvese izvo Apple zviripo pamusika kubva kuMacs kuenda kuApple Watch, kuburikidza neiyo iPhone, uye iyo iPad. Kusvika parizvino, iyo kambani yeAmerica yaingopa vatengi vayo vebhizinesi michina yayo pamwedzi, pachinzvimbo chekubhadhara mutengo wakazara wemidziyo.
Kukwereta kwemakomputa uku kwakabvumidza kambani kuve muyedzo pakati pemakambani, kunyangwe iri kambani haana kumbokanganwa musika wepamba, uko inoita kuti zviwanikwe kune vashandisi nhamba hombe yemamodeli kuyedza kuvhara zvese zvinodiwa. Ehezve, iyo Apple michina iyo ichatanga kushambadzira ichave yakanangana chete nemakambani.
Zvese zvigadzirwa zveApple izvo zvainoita kuti zviwanikwe kumakambani zvichafukidzwa nechirongwa cheHP chekutsigira, icho chinobvumidza manejimendi manejimendi uye kuongorora pamwe nezvose zvigadzirwa zvinogadzirwa nekambani uye zvinoita kuti zviwanikwe kune vashandisi vayo. Uku kuwedzerwa kweiyo chigadzirwa katalog ichave ichiwanikwa chete kumakambani mune anopfuura zana zana nzira dzekuparadzira kuti zvapararira pasirese uye vanozove nesarudzo yekutenga kana nguva yechibvumirano yabhadharwa.
Kubva panguva yekuve chikamu, mazhinji ndiwo makambani atanga ku tevedzera Mac senzira yekushandisa mumahofisi avo, uye HP yanga isingade kusiiwa kunze kwekeke, kunyangwe isiri michina yainogadzira zvakananga, nenzira iyi ine mukana wekuhwina hongu kana hongu, nekuti kana mutengi asingade Windows-based solution, vanogona kuwana mhinduro kubva pane macOS.
Chibvumirano ichi neApple zviri pachena haisi nhau dzakanaka dzeMicrosoft, uyo mumakore achangopfuura haana kungotarisa mukugadzirwa kwemacomputer, asiwo pane gore manejimendi naAzure, kwaurikuwana huwandu hukuru hwemari, pamwe nekutengesa Hofisi nenzira dzakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » HP inozivisa kuti ichatanga kutengesa maMac kuwedzera kune zvimwe zvigadzirwa zveApple
Yakazara Hondo Saga: Zvigaro zveBritain, zvinouya munguva pfupi macOS uye Linux